#Senegal ayaa u soo baxday Koobka Aduunka ee 2018 Iyaago ka maqnaana mudo 15 sano ah | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Senegal ayaa u soo baxday Koobka Aduunka ee 2018 Iyaago ka maqnaana...
#Senegal ayaa u soo baxday Koobka Aduunka ee 2018 Iyaago ka maqnaana mudo 15 sano ah
Xulka qaranka Senegal ayaa xalay u soo Baxay koobka aduunka ee 2018 kadib markii ay ka adkaadeen Qaranka Koonfur Afrika.
Senegal ayaa xalay 2-0 waxay kaga Adkaadeen Marti Galiyayaashii Koobka aduunka ee 2010 oo ah Koonfur Anfrika Ciyaar xiiso badneyd oo ka dhacday.
Laacibka kooxda Liverpool Sadio Mane ayaa xalay u sahlay Senegal in ay u soo Baxaan koobka aduunka ee 2018 kadib bandhig wanaagsan uu sameeyay.
Mane ayaa horay ugu dhaawacmay gudashada waajibaadka Qarankiisa laakiin Mane ayaa soo laabtay kulankii Kooxdiisa Liverpool ay Qasaaro 4-1 ah dusha uga Tuureen kooxda Hammers.
Sadio Mane ayaa Ciyaartii xalay xulkiisa ay ugu soo baxeyn koobka aduunka ee 2018 Ciyaaray 90 Daqiiqo waxaana uu sameeyay bandhig aad u wanaagsan oo soo Jiitay Dadka Senegal u dhashay ee Ciyaartaasi Daawaday.
Waa Markii labaad ee Taariikhda Qaranka Senegal ay u soo Baxaan koobka aduunka.
Gool uu dhaliyay Diafra Sakho oo weerarka uga Ciyaara Westham United iyo Laad uu soo Tuuray oo uu si Khaldan isaga dhaliyay Daafac Koonfur Afrika u Ciyaarayay ayey ugu Fududaatay Senegal in ay u soo Baxaan koobka aduunka ee 2018.